IETT: Codsiyada Ashtakada ee "Metrobus" Waxaa hoos u dhacay 8,6 boqolkiiba | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulIETT: Codsiyada Ashtakada ee "Metrobus" Waxaa hoos u dhacay 8,6 Boqolkiiba
17 / 02 / 2020 34 Istanbul, IETT, GUUD, WADADA, HAY'ADAHA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, Metrobus, TURKEY
Dacwado ayaa loo gudbiyay metrobus
IETT waxay horumar ka sameysay khadadka sida ugu badan loo soo gudbiyo shaqooyinka ay ka qabato warbixinnada cabashada. Hawlaha caadiga ah ee la qabtay darteed, waxaa jiray 8,6 boqolkiiba cabashooyinka iyo 3 boqolkiiba hoos udhaca cabashooyinka guud.
Agaasinka Guud ee IETT, oo ah mid ka mid ah shirkadaha ku xiran Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul (IMM), waxay kordhisay tirada safarada ay ka imaanayaan 44 kun 1 ilaa 7 kun 24 khadka khadka tareenka, kaasoo adeeg siiya 6 milyan oo rakaab ah 900 maalmood maalintii oo leh 7 saldhig.
Horumar ayaa sidoo kale laga sameeyay guud ahaan khadka. TÜYAP, Avcılar, Şirinevler, oo bixiya adeeg nabadgelyo oo 24-saac ah, CevizliWiishashyada guryaha canabka ah, saldhigyada Edirnekapı iyo Zincirlikuyu waxaa loo diyaariyey muwaadiniinta naafada ah iyo carruurta ilaa subaxa. Mashruuc cusboonaysiin ayaa loo sameeyay wiishashyada iyo jaranjarooyinka, kuwaas oo had iyo jeer ku dhaca. Shaqadu waxay bilaabeen inay isku daraan saldhigyada Beşyol iyo Florya oo ay dhisaan xarun weyn oo aad ufiican.
XIDIGAHA METROBUS EE ALTUNİZADE
Saldhigga Altunizade Metrobus Station, ka dib is dhexgalka metrooga, aaladaha tikidhada tikidhada iyo warshadaha ayaa ku yaallay bilowga iyo dhammaadka goobaha xad dhaafka ah. Markaa, cufnaanta iyo isu beddelka cufnaanta ayaa la yareeyay. Intaa waxaa u dheer, iyada oo laga sameeyo boosteejooyin lagu soo dejiyo saldhigga, ballaarinta iyo horumarinta hagaajinta ayaa laga sameeyey meelaha rakaabka laga soo galo iyo meelaha laga baxo. Meel kale oo ka bixitaan ayaa la sameeyay iyadoo la ballaarinayo goobta rakaabka Altunizade Station. Aagga rakaabka Zincirlikuyu sidoo kale waa la ballaariyey. Sidan, albaabada laga soo galo iyo meesha laga baxo ayaa si weyn loo dejiyay, tirada cabashooyinka ayaa la yareeyay.
SAXIIXA WAQTI WAQTIGII
IETT waxay billowday codsi saxeexan oo loogu talagalay istaagida istaatikada ee loogu talagalay muwaadiniinta inay ku sugaan meesha saxda ah. Gawaarida gawaarida ee 'Metrobus' ayaa la yareeyay iyadoo la adeegsanayo isweydaarsiga u hoggaansanaanta tirada jeer ee Beylikdüzü iyo Söğütlüçeşme.
10 XUQUUQDA QARAXA EE CODSIYADA MOBİETT
Ku shaqee cusboonaysiinta aaladda GPS ee dhammaan gawaarida ku xiran IETT bilaabay. Hawshani waxaa loo qorsheeyay in lagu dhammeeyo waqti gaaban. Qaabkaan, waxaa la hubin doonaa in rakaabka sugaya saldhigga ay sifiican u heli doonaan macluumaadka ku saabsan goorta gawaaridu imaan doonaan. Codsiga Mobiett, oo ah mid ka mid ah cabashooyinka ugu waaweyn ee dadka reer Istanbul, hal-abuurnimo ayaa laga sameeyay kaabayaasha iyo aragtida labadaba. Ka sokow waxyaabaha lagu soo kordhiyay astaamaha cusub sida shaqsi ahaanta, sugida joogsiga, nooca cusub, oo bixinaya xarumo cusub oo loogu talagalay naafada, ayaa la bilaabi doonaa Maarso.
Nidaamka 'MOBİETT', nidaamka shabakadda oo dhan ayaa loogu wareejiyay adeegayaasha maxalliga ah, iyo qaab-dhismeed dib-u-dhis ah ayaa la sameeyay, oo ay ku jiraan adeegyada macluumaadka adeegga. Intaa waxaa sii dheer, habab digniin ayaa loo sameeyay si loogu wargaliyo adeegayaasha kahor intaan la faragelin howlaha, iyo wax ka qabashada hore iyo carqaladeynta adeega.
LIISKA DHAQAN EE LAGU SAMEEYEY
Celcelis ahaan 35 kun oo dalab ayaa loo sameeyaa IETT toddobaad kasta. Boqolkiiba 15-20 codsiyadaas waxay ka kooban yihiin cabashooyin. Iyaga oo ku kala saaraya cabashooyinka dadka ku nool Magaalada Istanbul, Agaasinka Adeegga Macaamiisha ee IETT wuxuu abuuraa liisaska qaab toosan. IETT waxay fulisaa daraasad dhameystiran oo lagu xallinayo dhibaatooyinka iyadoo lagu baarayo cabashooyinka muwaadiniinta mid mid. Daraasaddan caadiga ah awgeed, waxaa jiray boqolkiiba 100 hoos u dhaca tirada cabashooyinka iyada oo lagu saleynayo 3 kun oo safar ah sanadkii la soo dhaafay.
IETT waxay abaabushaa duulimaadyadeeda qorshe ballaaran si dadka reer Istanbul ay u helaan adeeg wanaagsan. Dadka daggan Magaalada Istanbul waxay usoo diri karaan dhamaan codsiyadooda, talo soo jeedinta iyo cabashooyinka iyagoo u maraya ALO 153 Xarunta Wicitaanka, MOBİETT dalab, IETT xisaabaadka warbaahinta bulshada iyo websaydhka.
Hami-Haa Hooyooyinka iyo carruurtu waxay ku riyaaqeen Erikyada